Cook anoenderera mberi nekutengesa kuChina, izvozvi aine nzvimbo yekutsvagisa munyika | Ndinobva mac
Zvinogoneka kuti Apple ichaenderera mberi nekubheja zvakanyanya pamusika weChinese kunyangwe iko kudonha mukutengesa kwemidziyo munyika nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, asi chimwe chazvo chiri pachena, nhasi musika weChinese ndewechipiri weApple mukutengesa uchingopfuura ne Nyika dzakabatana. Neichi chikonzero uye uchitora mukana wekushanya kwakasiyana kweiye CEO wekambani Tim Cook munyika, iri kubheja zvine mutsindo kumativi akasiyana. Imwe yemafonti aya chiziviso chakaitwa nefemu yeiyo yakarumwa apuro pane nyowani yekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo munguva pfupi kuvhura muChina.
Parizvino zvese zvakavharwa mushure meiyo shanya - Apple CEO musangano negurukota renyika Zhang Gaoli, kuzivisa ino Apple hub munyika. Ruzivo nezvekwavanogara kana kudyara kwavachaita muzvivakwa uye nezvimwe zvinongedzo zvekutarisa nezvenhau yenhau yesaizi iyi, hazvizivikanwe parizvino uye huwandu hwevashandi hunotarisirwa kuve hwakakosha kunyangwe pasina data kongiri nezvazvo.
China inoramba ichimisikidzwa seimwe yeakanyanya makosi uko vakomana veCupertino vanoda kuisa mari nekuedza. Parizvino kutengesa kwezvigadzirwa zvayo munyika isu tave toti ivo vakamira zvishoma, asi hazvishamise nekuda kwegore rekutanga rekutengesa. Iye zvino rebound inotarisirwa kune gore 2017 Uye ndezvekuti kunyangwe chiri chokwadi kuti zvigadzirwa zveApple zvakakura muhuwandu uye mhando, hatigone kukanganwa kuti iyo iPhone inoramba iri nyeredzi uye kutengesa kwayo kwadzikira zvichienzaniswa nekota yapfuura.
Apple haisi kuve nyore munyika Sezvo China yakazvigumira munzira dzakawanda, asi chokwadi ndechekuti kunyangwe paine zvakaipa, zvinoitwa naApple zvinoramba zvine simba. Zviripachena nzvimbo yekutsvagisa nekusimudzira chinhu chinobatsira nyika yacho pachayo uye zviri pachena Apple, saka isu tine chokwadi chekuti iyi inzira yakanaka mukutarisana nematambudziko ekambani nenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Cook anoenderera mberi nekutengesa kuChina, izvozvi aine nzvimbo yekutsvagisa iri munyika